တောင်ကုတ်ကိစ္စ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးလုပ်ဆောင်မည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တောင်ကုတ်ကိစ္စ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးလုပ်ဆောင်မည်။
တောင်ကုတ်ကိစ္စ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးလုပ်ဆောင်မည်။
Posted by chityimhtoo on Jun 8, 2012 in News | 18 comments
ဇွန်လ ၇ ၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် တောင်ကုတ်မြို့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် လူ ၁၀ ဦးအသတ်ခံရမှုအတွက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းယနေ့ထုတ်သတင်းစာများတွင် ဖေါ်ပြချက် အရသိရသည်။
ယခုလ ၆ ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတောင်ကုတ်မြို့သို့ ဖြတ်သန်းသည့် ရိုးမသစ္စာမှန်လုံယာဉ်ပေါ်မှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၁၀ဦးကို တောင်ကုတ်မြို့ခံလူအုပ်စုကသတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလိုစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကာ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍တိုက်ရိုက် တင်ပြရန် ယင်းကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
စုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွင် ပြည်ထောင်စု ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီးနှင့် ဒုရဲချုပ်တို့ကဦးဆောင်ကာကျန် ၁၄ဦးမှာ ရခိုင် ပြည်နယ် ၊ ခရိုင် ရဲဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အရာရှိများပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ယခုကဲ့သို့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်ကုတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသူများထဲမှ တဦးဖြစ်သူဦးမောင်နီ၏ သားဖြစ်သူက “ကျွန်တော့် အဖေဆုံးသွားတယ် ကြားချိန်မှာတော့ စိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားရပါတယ်။ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့တာတော့ ကျွန်တော်လည်းသတိမထားမိပါဘူး။ သေပြီးတဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာတော့ မိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ တခြားခံစားချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး” ဟုသို့ပြောသည်။
တောင်ကုတ်မြို့တွင် အဖြစ်အပျက်မဖြစ်ပျက်မီနံနက်ပိုင်း ကကျောက်နီမော်ကျေးရွာအနီးဖြစ်ပျက်သည့် ရခိုင်အမျိုးသမီးတဦးအားသားမယားပြုကျင့်ကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီုးလှုံ့ဆော်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေမှုရှိခဲ့သည် တောင်ကုတ်မြို့ခံများကပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိတောင်ကုတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှု သတင်း တစုံတရာ မကြားသိရပါ။ ။
(က)	ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့်	ဥက္ကဌ
(ခ)	ရဲမှူးချုပ်ဇော်ဝင်း	ဒုတိယဥက္ကဌ
(ဂ)	ဦးစံရွှေမောင်	အဖွဲ့ဝင်
(ဃ)	ရဲမှူးကြီးမျိုးဆွေဝင်း	အဖွဲ့ဝင်
(င)	ဦးကျော်စင်	အဖွဲ့ဝင်
တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ ကုလားတွေငွေပုံပေးလို့ သူတို့လက်ကိုင်တုတ်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ကိုယ့်လူမျိုး ရခိုင်
စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ ကိုယုံကြည်စွာအားကိုးချင်ပါတယ်
တရားဥပဒေ အတိုင်း မှန်မှန် ကန်ကန်ဘက်မ လာဘ်မစား ပဲ စုံစမ်း စစ်ဆေး ဖော်ထုတ် နိုင်ပါစေ လို့ မျော်လင့်ပါတယ်
အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပေါင်း လုပ်စားနေတာဘဲသူလဲ တောင်ကုတ်သား
ညည်းဟာက သီဟရာဇာ ပိုစ့်မှာလဲ ဒီစာသားပဲ ..
ကော်ပီ ပေ့ များ လျှောက်လုပ်နေသလား ..
စာလုံးပေါင်းမှားတာခြင်းတောင် တူနေတယ် …
ထပ်တော့ ပြန်ရိုက်ပါဟယ် …
ခရိုနီ ဆိုတာကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။တောင်ကုတ်မြို့မှာ ဦးကျောက်တောင်က ခရိုနီဘဲ။
သမ္မတအဆင့်၊ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊စစ်တိုင်းမှူး၊ဗျူဟာမှူးဆိုတာ သူ့ လူတွေဘဲ။သူခိုင်း
တာလုပ် သူကျွေးတာစားထားကြလေတော့။မပြောလဲ သိနိုင်လောက်ပါပီ။
သံတွဲဒေသခံတွေက နစ်နာသူတွေကို ပြန်ကူညီဖို့ ၊အားပေးနှစ်သိမ့်နေယုံဘဲ တတ်နိုင်
တယ်။တောင်ကုတ်မှာ တရားခံတွေကို ပြေးနိုင်၊ပုန်းနိုင်အောင် အချိန်ဆွဲနေတယ်။
အဲတော့. ဘယ်သူက လူလိမ်ဆိုတာ သိရော့ပေါ့။ခွဲခြား သိမြင်နိုင်ပါစေ။
ယူက ရခိုင့်သွီးချေ တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။(ရခိုင် မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာ)။ ကော်ပီ ပေ့ … လွန်လွန်းတယ် အေ …
လူစားထိုး အဖမ်းခံဖို့ အခြေမဲ့ အနေမဲ့တွေ တန်းစီနေကြပီ။
ဟုတ်ပါ့ ကမှော် ရယ်–၊
ဘယ်သူလည်းသာ ဗျောင် ပြောပြလိုက်ပြီး၊
အဲသူ သည်ကိစ္စနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်သလည်း —
သူ့ခံစားချက်ကတစ်ထပ်တည်းဖြစ်လို့နေမှာပေါ့ အေ ။
အော် ဆရာမှော်ရယ်…သူလည်း ၁၀ လိုချင်ရှာလို့နေမှာပေါ့။ အင်း………..တစ်သိန်းပြည့်ဖို့နီးနေပြီ
နောက် ကိုးသောင်းကိုးထောင်ဖိုးလောက်မန့်ပြီးရင် သဂျီးဆီက တစ်သိန်းထုပ်ရတော့မယ်။ လာထား…။
အားလုံးသော အမှုခပ်သိမ်း အဖြစ်မှန်ပေါ်ပါစေဗျား။
အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ်ပါစေ
smille boy000 says:
ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကိုအမှန်အ တိုင်းပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ အခုလိုမဆိုင်သူတွေကိုဒီလိုလုပ်တာတော့မကောင်းပါဘူး။ အစိုး၇အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးနြ့အမှန်ကန်ဆုံးဖ်ြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို.ဆု
လောလောဆယ်ဘူးသီးတောင်မောင်တောကရွာ၂ရွာကိုကုလားတွေမီးရှို့နေတယ်။ပစ်တဲ့ ရဲ ၂ယောက်
မီးစကကူသွားနေပြီ၊အဲတာပတ်သက် အမြန်ဆုံး အမှန်မှန်ကန်ကန် ဖေရှင်းပေးဖို့။
ဖမ်းမယ်ဆိုရင် မိမှာပါ … မဖမ်းရင်တော့မိမယ် မထင် ..မထင် ..
ဒီလောက် လင်းလင်းထင်းထင်း အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးမှာ ဓါတ်ပုံလေး တပုံမှ
ကိုဂျစ်ပစီရေ. တောင်ကုတ်မှာ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်ဟာ ညနေ(4:30-6:0)နာရီကြားမှာဖြစ်သွားတာနော်။
ဒါပေမယ့် ခုထိ ဓါတ်ပုံတပုံမှ တက်မလာဘူးဆိုတာ စဉ်းစားစရာအမှန်ပါဘဲ။ဒီကိစ္စကို တမြို့ လုံးက ဖုံးဖိထားစေချင်
ဘယ်တော့မှလဲ တော့မှလဲ တက်လာတော့မည်မထင်ပါ။အံ့ကြရပါ၏။